ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင် | HONG KONG မှဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ။ ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်း။ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရှိရယူပါ။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် - ဟောင်ကောင် - ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်မှရယူပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်လျှောက်လိုပါကဟောင်ကောင်၏ ၉ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။
●ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ။
●ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ။
●ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုဟောင်ကောင်။
●ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကြေးဟောင်ကောင်။
●ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်သည်ဟောင်ကောင်အတွက်ကုန်ကျသည်။
●ဟောင်ကောင် Type9Asset Management License အတွက်ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရယူခြင်း။
●ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ။
●ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီ ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်။
●ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်အတွက်ရရှိသောဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၉ ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရရှိရန်ကူညီခြင်း၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရှေ့နေများသည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ဟောင်ကောင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၉ ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လည်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဟောင်ကောင်အတွက် ၉ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုကြိုတင်ရယူရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင်ဟောင်ကောင်အတွက်အခကြေးငွေများ။
ဟောင်ကောင်၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးများနှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်ကိုလျှောက်ထားပါ။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ ဆက်သွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ပေးသူဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုပေးအပ်သည့်ဟောင်ကောင်အတွက်နိဒါန်း
Securities and Futures Commission (SFC) သည် SFO (Securities & Futures Ordinance) မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ဟောင်ကောင်၏လုံခြုံရေးနှင့်အနာဂတ်စျေးကွက်များတွင် ၀ င်ရောက်လိုသည့်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတံခါးဖွင့်ပေးသည်။ Type9လိုင်စင်တွင်အခြားသူတစ် ဦး အတွက်အာမခံအစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်အနာဂတ်စာချုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပုံမှန်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားလုံးအတွက်အသေးစိတ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
၇ ရာစုတွင်ဟောင်ကောင်ဒေသသည်ယနေ့ဟောင်ကောင်ဒေသဖြစ်သည်။ ၁၅၁၃ တွင်ပေါ်တူဂီဘုရားဖူး Jorge Alvares ဟောင်ကောင်တွင်ပေါ်လာသည်။ ပေါ်တူဂီနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားလဲလှယ်မှုများမကြာမီစတင်ခဲ့သည်။ တရုတ်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့အကြားတိုက်ပွဲများလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမကြာမီလဲလှယ်မှုများရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ ၁၆၉၉ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှမှ East India ကုမ္ပဏီသည်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဗြိတိန်နှင့်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင်အဓိကဘိန်းစစ်ပွဲပြီးဆုံးခါနီးတွင်ဗြိတိန်သည်ဟောင်ကောင်နှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ထိုမြို့သည်တရုတ်တောင်ပိုင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဆိုရှယ်လစ်များကတရုတ်ကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင်လူအများအပြားသည်သူတို့၏အခွင့်အရေးများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဟောင်ကောင်သို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ဗြိတိသျှလမ်းညွှန်ချက်များအပြီးတွင်တရုတ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ဟောင်ကောင်ကိုပြန်လည်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ယခုတရုတ်နိုင်ငံသည်အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဟောင်ကောင်သည်ယခင်ကရှိခဲ့သောနိုင်ငံရေး၊ ငွေကြေးနှင့်အလုံးစုံဥပဒေများအတွင်း၌တူညီနေသည်။
ဟောင်ကောင်သည်တရုတ်ပြည်၏တောင်ဘက်ကမ်းခြေတွင်ရှိပြီးမကာအိုအရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ (၃၇ မိုင်) တွင် Shengzhen ၏မြောက်ဘက်ပုလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မြောက်ဘက်ရှန်ကျန်းမြစ် (Guangdong) ၏ဂွမ်ဒေါင်း (Guangdong) မြို့နှင့်တောင်ဘက်သို့ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိ Zhuhai ရှိ Wanshan ကျွန်းများကိုပြသထားသည်။ ၎င်းတွင်ဟောင်ကောင်ကျွန်း၊ ကွမ်းလုံကျွန်းဆွယ်၊ နယ်မြေသစ်များနှင့်အခြားကျွန်းငယ် ၂၆၂ ခုပါဝင်သည်။
အစပိုင်းမှာတော့ဟောင်ကောင်ဟာငါးဖမ်းတဲ့မြို့လေးပါ။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံးမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှေ့သည်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဟောင်ကောင်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဂိမ်းတစ်ခုအတွက်အချိန်အတော်ကြာဆက်လက်ကစားခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်သည်“ တစ်နိုင်ငံတည်း၊ မူဘောင်မဟာဗျူဟာ ၂ ခု” အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ဘဏ္frameworkာရေးမူဘောင်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအင်္ဂလိပ်စာသည်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်၏တရုတ်ပြည်နှင့်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များအမှန်တကယ်တည်ရှိသည်။ လက်ရှိမြေပြင်အနေအထားနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်သောအပြင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဟောင်ကောင်သည်စည်းဝေးကြီး၏ဒေသများနှင့်ပူးပေါင်းသည့်ဘဝလမ်းစဉ်ကိုသင်မကျမချင်းတိုင်အောင်လှည့်စားနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင်သည်ယခုအချိန်တွင်အတော်လေးသာယာဝပြောသောကမ္ဘာချီမြို့ကြီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယမြောက်အကြီးမားဆုံးငွေကြေးဆိုင်ရာအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်သည်အာရှ၏ဘဏ္monetaryာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးတွင်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကြီးမားသောငြိမ်းချမ်းရေး၊ လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးနှင့်အလုံးစုံပြည့်စုံသောဥပဒေများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းကို“ အရှေ့တိုင်းပုလဲ”၊ “ Gourmet ပရဒိသု” နှင့်“ Shopping Paradise” ဟုလူသိများသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ကျော်ကဤနေရာတွင်အဓိကအခြေချနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Qin မင်းဆက်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောစပ်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၈၄၁ ခုနှစ်အထိ Qing မင်းဆက်တွင်တရုတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီနေထိုင်ခဲ့သည်။ Qin မင်းဆက်သည် Nam Yuet ၏ဘုံကိုတည်ထောင်ခဲ့သော Qin မင်းဆက်အဆုံးသတ်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဟန်မင်းဆက်သို့ရောက်ရှိ။
၁၈၄၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်ပထမဘိန်းစစ်ပွဲ၌တရုတ် Qing မင်းဆက်ပြိုလဲခြင်းကြောင့်တရုတ်အစိုးရသည်ဗြိတိသျှအဖွဲ့အစည်း၏အစဖြစ်သော Chuanpee ၏ကွန်ဗင်းရှင်းအောက်တွင်ဗြိတိသျှသရဖူကိုမဆန့်ကျင်ဘဲဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုလက်နက်ချခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်၏။ ၁၈၄၂-၁၈၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဟောင်ကောင်ကျွန်း၊ ကလိုလွန်းနှင့်နယ်မြေအသစ်များသည်ဘိန်းစစ်ပွဲများနှင့်တရုတ် - ဂျပန်စစ်ပွဲများတွင်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၁၈၄၁ ခုနှစ်တွင်သဟဇာတစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရေးဆွဲသောအချိန်တွင်တရုတ်theကရာဇ်ကဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်သင့်သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည်ဟောင်ကောင်ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင်ဂျပန်ကသိမ်းပိုက်စဉ်ကလေးနှစ်တာကာလမှ လွဲ၍ ဟောင်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ မှ ၁၉၉၀ အတွင်းမြို့ပြပြည်နယ်သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့ပြီးခိုင်မာသည့်တပ်ဆင်မှုအခြေစိုက်စခန်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာareaရိယာတိုးတက်လာခြင်းအားဖြင့်“ အာရှကျားလေးကောင်” ၏ပထမဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံသို့ကူးပြောင်းခြင်းမတိုင်မီကဟောင်ကောင်သည်ဗြိတိသျှပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ နီးပါးရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အခြေခံအုတ်မြစ်အများစုသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အစီအစဉ်နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုရရှိသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်“ One Country, Two Systems” စည်းမျဉ်းအောက်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ဟောင်ကောင်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဗြိတိန်ရှေ့ဆောင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ဟောင်ကောင်၏ ၁၅၆ နှစ်တာကာလကုန်ဆုံးမှုကိုပြသခဲ့သည်။
ထို့အပြင်လက်ရှိတွင်ဟောင်ကောင်သည်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်လူသိများသည်။ တရုတ်မှအခြားနိုင်ငံများသို့စျေးနှုန်းချိုသာစွာစီးဆင်းနေပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့်လွှဲပြောင်းမှုများအတွက်သိသာသောမြို့လည်းဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်သည်ကမ္ဘာ့အထင်ကရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ခရီးသွားရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဝေးလံသီခေါင်သောကျွန်းပေါင်း ၂၆၀ ကျော်ရှိသော်လည်းစုံတွဲတစ်တွဲပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤအချက်ကဟောင်ကောင်သည်ထူးခြားသောကွဲပြားခြားနားမှုအတိုင်းအတာကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ကျွန်းများသည်အခြားနေရာများတွင်၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စွမ်းအင်နှင့်မတူဘဲတိတ်ဆိတ်သောရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်။ ဟောင်ကောင်ကျွန်းသည်လက်ရှိအဆောက်အအုံများ၊ ပြည်နယ်အဆောက်အအုံများနှင့်သမားရိုးကျဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုရောနှောထားသောရောစပ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်သည်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူပိုင်းဒေသနှင့်အပူပိုင်းဒေသတွင်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်ပုံမှန်အပူချိန်မှာ ၂၂.၈ ℃ဖြစ်သည်။ နွေရာသီသည် ၂၆ ℃မှ ၃၀ between အကြားရှိအပူရှိန်နှင့်အတူအရည်ပျော်။ စိုစွတ်နေသည်။ ဆောင်းရာသီမှာအေး။ ခြောက်သွေ့သော်လည်းအပူချိန်သည် ၅ under အောက်ကျသည်။ မေလမှစက်တင်ဘာအထိတောက်ပနေသောရာသီဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိမကြာခဏမုန်တိုင်းများကျရောက်တတ်သည်။ ဟောင်ကောင်တွင်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများစုစည်းပြီးလူ ဦး ရေထူထပ်စွာထူထပ်သောမြို့ပြဒေသများရှိသည်။ အပူရှိန်ကြောင့်ကျွန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသများအကြားအပူလွန်ကဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဟောင်ကောင်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများသည်များပြားလှသည်။ ၎င်းသည်ဟောင်ကောင်တစ်လျှောက်ရှိအစဉ်အလာအမွေအနှစ်နေရာများ (ဥပမာ Tai O ရှိ Stilt အိမ်များအပါအ ၀ င်) အများစု၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။,ဖိုးလင်းကျောင်းတိုက်,Tien Tan Buddha Statu၊ Fu Shin Street Traditional Bazaar, Che Kung Temple, Man Mo Temple, Buddhist Ten Thousand Buddhas of Thousand Buddhist Status, ကျယ်ပြန့်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ (ဥပမာ၊ စိန့်ဂျွန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ စိန့်အင်ဒရူးဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Kowloon Union Church), ပြပွဲ ခန်းမများ (ဥပမာ - ဟောင်ကောင်သမိုင်းပြတိုက်၊ ဟောင်ကောင်အနုပညာပြတိုက်၊ ဟောင်ကောင်အနုပညာပြတိုက်၊ ဟောင်ကောင်အမွေအနှစ်ပြတိုက်၊ ဟောင်ကောင်အမွေအနှစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရေးစင်တာ)၊ ဘုံနေရာများ၊ အပန်းဖြေဥယျာဉ်များ၊ လှပသောဒီဇိုင်းများနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခြားအမည်များ
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူခြင်းဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရရှိသည်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်ကိုလျှောက်ထားပြီးဟောင်ကောင်လျှောက်လွှာ အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်၏ကုန်ကျစရိတ် ၉ အမျိုးအစားပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထား၊ ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခွင့်လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထား၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရယူဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရယူဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားသည်။ ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ရရှိသည်။ ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ဟောင်ကောင်ကိုရယူပါ၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ဟောင်ကောင်လျှောက်ထားသည်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ဟောင်ကောင်အတွက်လျှောက်လွှာ၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ဟောင်ကောင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ဟောင်ကောင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK , ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK ရယူပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK ရယူပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK လျှောက်ထား, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK လျှောက်လွှာ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK အဘို့အလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် HK ၏ကုန်ကျစရိတ်, လိုင်စင် HK, လိုင်စင်ဟောင်ကောင်ရယူ, လိုင်စင် HK , လိုင်စင် HK လျှောက်ထား, HK လိုင်စင်လျှောက်လွှာ, လိုင်စင် HK များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, လိုင်စင် HK ၏ကုန်ကျစရိတ်။
ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုကူညီသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံသည်ဟောင်ကောင်ရှိဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်အတွက်ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုအခမဲ့အကြံပေးသည်။
ဟောင်ကောင်ရှိ9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီလုံ့လဝီရိယရှိရှိဖြင့်လေ့လာခြင်း၊ KYC နှင့်သင့်လျော်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူရန်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်။
ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဟောင်ကောင်တွင်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အာဏာပိုင်များသည်နိဂုံးချုပ်သည်။
လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရယူခြင်းလိုင်စင်:4လအတွင်း
အနည်းဆုံးပေးဆောင်မြို့တော်: N / A (အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများမပါ ၀ င်သောလိုင်စင်အခြေအနေရှိပါက); အခြားအခြေအနေများတွင်ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀,၀၀၀)
အနည်းဆုံးငွေအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက် HK $ 100,000.00; သည်အခြားကိစ္စများတွင်ဟောင်ကောင် $ 3,000,000.00
ဟောင်ကောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်၊ နယူးယောက်နှင့်တိုကျိုတို့နှင့်အတူကမ္ဘာ့အလေးစားဆုံးဘဏ္financialာရေးတည်နေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်၏ပထဝီအနေအထားအရအရှေ့နှင့်အနောက်အကြားဂိတ်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိသည် ၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးစင်တာဖြစ်သည်။
Type9Securities and Futures Ordinance (SFO) အရ 'ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု' ဆိုသည်မှာဖောက်သည်များအတွက်ငွေချေးစာချုပ်များသို့မဟုတ်အနာဂတ်စာချုပ်များ၏အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲရန် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြဌာန်းချက်အပေါ် အခြေခံ၍ 'ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု' ကိုဆိုလိုသည်။ အကောင့်သို့မဟုတ်အလားတူရန်ပုံငွေ, ဤစည်းမျဉ်းလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားအားဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာ Type9လိုင်စင်သည်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းသာမကလိုင်စင်ရကော်ပိုရေးရှင်းကထိန်းချုပ်ထားသောရန်ပုံငွေများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လုံခြုံရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ပါထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမတော်တဆလုပ်ဆောင်မှုများသည်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လိုင်စင်များကို Type9(Secaling in Dealing) နှင့် Type 1 (Advising on Securities) လိုင်စင်များရယူရန်မလိုဘဲ (အကန့်အသတ်ဖြင့်) လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
လိုင်စင်ရကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များသည်လိုင်စင်ရကော်ပိုရေးရှင်း (LRs) ၏ကိုယ်စားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလုပ်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လိုင်စင်ရယူရန်တာ ၀ န်ရှိသည့်အရာရှိအဖြစ်အနည်းဆုံးလူနှစ် ဦး ကိုခန့်ထားရမည်ဖြစ်သည် ။ROs များသည်လျှောက်လွှာကော်ပိုရေးရှင်းမှထုတ်ယူရန်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ရန်အတွက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောစစ်ဆင်ရေးတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သော LRs များဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့လိုင်စင်ရရှိထားသော Type9စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလုပ်ဆောင်မှုကိုတက်ကြွစွာပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်အထူးတာ ၀ န်ယူခြင်းရှိသည့်ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်း၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသည်အနည်းဆုံး RO.Each တစ်ခုချင်းစီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ် ဦး ဖြစ်ရမည်။ SFC က။
အခြေအနေအားလုံးတွင်ကုမ္ပဏီအားကြီးကြပ်ရန်ဟောင်ကောင်တွင်အနည်းဆုံး RO နေထိုင်သူတစ် ဦး အမြဲတမ်းရှိရမည်။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုထက်ပိုသောသူအားသူသို့မဟုတ်သူမသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည်ဖြစ်စေတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအကြားပthereိပက္ခမရှိပါ။ အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသည်အနည်းဆုံးအဆိုပြုထားသောတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်လိုင်စင်ချပေးတာလဲ။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်၊ ၉ ဟောင်ကောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းသောအခါ၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဟောင်ကောင်မှသင်၏ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုးရိုးသားသားကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်သင်အားကိုးနိုင်သည်။ “ သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောကြောင့်ငွေထက်ငွေရေးကြေးရေးအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ငါတို့အားလုံး ၀ င်ငွေရကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပိုက်ဆံသည်အလိုအလျောက်လိုက်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖောက်သည်များနှင့်ရည်ညွှန်းမှုများရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်အားရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီများသည်ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်။9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အမျိုးအစား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်အားရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီများသည်ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်။ 1 ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အမျိုးအစား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ အမျိုးအစားပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်၊ ၉ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်၊ ၉ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်ဥပဒေအနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီ ၉ ခုဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက် ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊ ကောအတွက်ဈေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ nse ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်ဈေးအကြီးဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင် ၉ အမျိုးအစားလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင် ၉ အမျိုးအစားလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင် Type ၉ လိုင်စင်အတွက်ဥပဒေအနိမ့်ဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးရှေ့နေများ
သိရန်လိုအပ် - ဟောင်ကောင်၏ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ထူးခြားချက်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
ဟောင်ကောင် Type9Asset Management License အတွက်လျှောက်ထားရန်အချက်အလက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များ
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်တစ် ဦး တည်းသာ (တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ)
ဒါရိုက်တာတစ် ဦး တည်းသာ (သာမာန်ပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ)
အနည်းဆုံးတာဝန်ရှိအရာရှိ (၂) ဦး (ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်စီးပွားရေးကိုကြီးကြပ်ရန်ဟောင်ကောင်တွင်အနည်းဆုံး RO နေထိုင်သူတစ် ဦး သည်အချိန်မရွေးရရှိနိုင်ရမည်)
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အများပြည်သူမှတ်တမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ရှောင်ရှားလိုပါကအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူဝန်ဆောင်မှုကိုကြင်နာစွာတောင်းဆိုပါ
ဒါရိုက်တာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အများပြည်သူမှတ်တမ်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုတားဆီးလိုပါကအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူဝန်ဆောင်မှုကိုတောင်းဆိုပါ။
နယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်ဟောင်ကောင်အတွက်အခွန်။ ဟောင်ကောင်မှရရှိသော ၀ င်ငွေအပေါ်အမြတ်ခွန် ၁၆.၅% ဖြင့်ကောက်ခံသည်။
ဟောင်ကောင်အပြင်ဘက်မှရရှိသောအမြတ်များသည်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ် ၀ င်ငွေအပေါ်အခွန်ရှောင်ခွန်နှင့်အရင်းအနှီးအမြတ်များအပေါ်အခွန်မကောက်ခံပါ။ ဟောင်ကောင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သော်လည်းအခြားနေရာမှအမြတ်အစွန်းရရှိသောကုမ္ပဏီကိုဟောင်ကောင်ရှိအဆိုပါအမြတ်များအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
နှစ်နိုင်ငံအခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ - ဟောင်ကောင်သည်သြစတြီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဘရူနိုင်း၊ ကနေဒါ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိုင်ယာလန်၊ ဂျပန်၊ ဂျာစီ၊ ကူဝိတ်၊ Liechtenstein၊ လူဇင်ဘတ်၊ မလေးရှား၊ နှစ်နိုင်ငံအခွန်သက်သာခွင့်အတွက်အခွန်သက်သာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်နယူးဇီလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ စပိန်၊ ထိုင်း၊ အင်္ဂလန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကာတာနှင့်တရုတ်ပြည်မကြီးတို့အသီးသီးရှိသည်။
ကုမ္ပဏီများသည်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏တညီတညွတ်တည်းသဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် AGM များကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး (AGM) ကိုပြက္ခဒိန်နှစ်စဉ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး AGM ၏နောက်ဆုံးရှေ့နောက် ၁၅ လထက်မပိုစေရ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ပထမဆုံး AGM ကို ၄ င်း၏ပေါင်းစည်းမှုပြီးနောက် ၁၈ လအတွင်းကျင်းပရန်မလိုပါ။
စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များ - ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီသည်စာရင်းကိုင်စာရွက်စာတမ်းများကိုထိန်းသိမ်းထားသင့်ပြီးဒါရိုက်တာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်ထားနိုင်သည်။
စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များ - ကုမ္ပဏီတခုစီသည်ဟောင်ကောင်စာရင်းကိုင်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သောစာရင်းစစ်ကိုခန့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိထားသည်။ မှတ်ပုံတင်သူမှစာရင်းဖွင့်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းအခွန်အာဏာပိုင်များသည်ငွေစာရင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။
နှစ်ပတ်လည်ပြန်ပို့မှုသည်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်တွင်နှစ်စဉ်ထည့်သွင်းသည့်နှစ်၏ ၄၂ ရက်အတွင်းနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတင်သွင်းရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုရောင်းချသူများအပေါ် မူတည်၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခကြေးငွေများကွဲပြားနိုင်သည်။
အတွင်းရေးမှူး - လိုအပ်သည် (ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်သူတရားဝင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်)
ကန့်သတ်ထားသောအမည်များ - မည်သည့်နာမည်ကိုမဆိုရာဇ ၀ တ်ပြစ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်နာမည်မဆိုဤကော်ပိုရေးရှင်းသည်ဗဟိုပြည်သူ့အစိုးရနှင့် HKSAR အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်နေသောမည်သည့်နည်းနှင့်မဆို၊ ဌာန၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ ကော်မရှင်၊ ဗျူရို၊ ကောင်စီ၊ အာဏာပိုင်။
သဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်လိုင်စင်လိုအပ်သောအမည်များ - ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အာမခံ၊ အာဏာ၊ ဘဏ်၊ ဗျူရိုအဖွဲ့ချုပ်၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ Chartered၊ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကော်မရှင်၊ သမဝါယမ၊ ကောင်စီ၊ ဌာန၊ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစိုးရ၊ အာမခံ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ၊ Mass Transit, မြူနီစီပယ်, ပြန်လည်အာမခံ, တော်ဝင်, ချွေတာသုံးစွဲ, ခရီးသွား Association ည့်အသင်း, Trust, ဂေါပက, မြေအောက်မီးရထား
တရားမ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်တော်ဝင်သို့မဟုတ်အစိုးရ၏ထောက်ခံအားပေးမှုကိုဆိုလိုသည်ဆိုသောမည်သည့်အမည်မဆိုတားမြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအမည်အတွက်ကန့်သတ်ထားသောဆက်သွယ်မှုများ ပြည်နယ်အမည်၊ နိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအမည်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ကန ဦး စိစစ်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာ KYC စာရွက်စာတမ်းများကိုစုဆောင်းခြင်း
တစ် ဦး ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်
သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ခြင်း (စီးပွားရေးစီမံချက်များ၊ လက်စွဲနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ)
တာ ၀ န် ၀ တ္တရား ၂ ခုကိုခန့်အပ်ရန်အတွက်လျှောက်လွှာ
ပေးဆောင်ငွေအရင်းအနှီးကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် (ယခင်အစောပိုင်းကလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသေးပါ) မှသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအတွင်းအပြည့်အဝအပ်နှံရမည်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
(အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၊ အစုရှယ်ယာရှင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ တာ ၀ န်ရှိသူနှင့်အတွင်းရေးမှူးကပေးရမည်)
လူနေအိမ်လိပ်စာအထောက်အထားမိတ္တူ (၃ လထက်မပိုသောအသုံး ၀ င်ငွေခွန်) ကိုအင်္ဂလိပ်လို (သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသော
တက္ကသိုလ်ဒီပလိုမာ၏ notarized မိတ္တူ
သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအာဏာပိုင် (သို့) ဒေသန္တရဘဏ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများတောင်းခံနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင်တွင်လိုင်စင်ချထားခြင်းအတွက်ငြင်းဆိုခြင်းအမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဟောင်ကောင်ရှိငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်။
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဟောင်ကောင်အားကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်မဟုတ်ပါ။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းများကိုကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဟောင်ကောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်တွင်သုံးပါ။ အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်လိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားခွင့်မပြုပါ။ ဟောင်ကောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဆည်းပူး ဟောင်ကောင်များအတွက်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်သည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူရန်အကူအညီလိုသည်။
အီးယူနှင့်ကမ်းလွန်ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်သူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ်းလွန်ရရှိနိုင်သည့်အခြားပစ္စည်းများကိုစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများလည်းပေးထားသည်။ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကဟောင်ကောင်မှဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်ရှိအမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်သည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ထည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်စ်ကိုဖြည့်လိုသည် ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုအပြာစာပေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားဟောင်ကောင်ရှိအထောက်အပံ့မပေး ဟောင်ကောင်၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်မှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါဘူး ဟောင်ကောင်၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဟောင်ကောင်၏ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဟောင်ကောင်အားကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလည်းမပြုပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ.
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထား ဟောင်ကောင်နှင့်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်၌အကြှနျုပျတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဟောင်ကောင်ရှိတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအောက်တွင်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ ရန် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဆည်းပူး ဟောင်ကောင်များအတွက်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဟောင်ကောင်၏စီမံခန့်ခွဲခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်တွင်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များသုံးခြင်းများပြုလုပ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားဟောင်ကောင်မှပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုများအတွက်နှင့်ဟောင်ကောင်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများကိုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သလို ဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဟောင်ကောင်အားကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်မဟုတ်ပါ။
ဖြန့်ဖြူးသူသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ လုပ်လိုသောကန်ထရိုက်စစ်သည်များအားကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများအားဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းများကိုခွင့်မပြုပါ ဟောင်ကောင်မှာလိုင်စင်ရ.
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်နည်းပညာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အမှားလုပ်ရန်စက်ကိရိယာများသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။ လိုင်စင်လျှောက်ထားသည် ဟောင်ကောင်နှင့်ငါတို့လိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်အသုံးပြုပါ။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဟောင်ကောင်တွင်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားခွင့်မပြုပါ။ လိုင်စင်ဆည်းပူး ဟောင်ကောင်များအတွက်။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
အီးယူနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်များအတွက်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဟောင်ကောင်ရှိကမ်းလွန်ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များကိုသိပ္ပံနည်းကျအသုံးပြုခြင်းအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ပေးအပ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုနှင့်ဟောင်ကောင်`sဖြည့်ချင်တယ် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများအားသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သလို ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူ.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်တော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဟောင်ကောင်။
ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အပြင်ဟောင်ကောင်ရှိအောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများနှင့်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်အထူးဝန်ဆောင်မှု ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်
သင်ကဟောင်ကောင်အတွက်9နှင့်အတူဟောင်ကောင် Type XNUMX ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်လိုင်စင်ဖြင့်စတင်သော်လည်းဟောင်ကောင်ရှိ HR အထောက်အပံ့ကိုတိုးချဲ့သည်။ အနည်းငယ်
ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်တွင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ လိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ Type9လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဟောင်ကောင် ၉ ခုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။ အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေး, ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ, လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများအတွက် ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေး, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်အတူဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင်၏အခြားအထူးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ၉ ။ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အမျိုးအစား
ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာ!
ငါတို့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဟောင်ကောင်နှင့် 108 နိုင်ငံများအဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ဘဏ်အကောင့် ဟောင်ကောင်နှင့် ၁၀၈ နိုင်ငံ၌ဖွင့်လှစ်ခြင်း
ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်လမ်းညွှန်မှုလည်းပေးသည် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ.
VoIP ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည် ဖုန်းနံပါတ် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူဟောင်ကောင်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်ရန်။
လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရသူများသည်သင့်အားဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် သင်၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ပြီးနောက်ဟောင်ကောင်ရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်အထူးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အပြင်ငါတို့၏ဖောက်သည်များကိုဟောင်ကောင်အတွက်ပြည့်စုံသောအကူအညီဖြင့်ထောက်ပံ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း ဟောင်ကောင်။
အကောင်းဆုံး ဟောင်ကောင်ရှိစာရင်းကိုင် ဟောင်ကောင်အတွက်စာရင်းကိုင်အထောက်အပံ့အတွက် 24 *7ကိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံမှငွေစာရင်းများပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
များအတွက်အတန်းထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီ ဟောင်ကောင်နှင့် 109 နိုင်ငံများတွင်။
ကိုလိုက်ရှာသည် လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၁၀၇ နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဟောင်ကောင်သို့အခမဲ့တိုင်ပင်ပါ။
သင်၏အဓိက ၀ န်ထမ်းများအားဟောင်ကောင်တွင်နေရာချထားရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ဗီဇာ ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းများအတွက်ဟောင်ကောင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့သည် web development ဟောင်ကောင်နှင့် (109) နိုင်ငံများရှိ XNUMX နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူအလွန်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် blockchain, IOT, web, ecommerce နှင့် app များရှိသည်။
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ပညာရှင်လမ်းညွှန်
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူခြင်းအတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတောင်းဆိုခြင်း။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Hong Kong အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်
ဟောင်ကောင်မှ ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်၏ ၉ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရယူရန်အတွက်ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ။ | ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ
ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်သည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူပါ
လိုင်စင်သည်ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ခုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဟောင်ကောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရယူပါ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ဟောင်ကောင် | လိုင်စင်ရယူပါ
ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ကနေယူဖို့လည်းမင်းကိုကူညီနိုင်မလား။
Hong Kong Type9လိုင်စင်သည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကွဲပြားခြားနားသောဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်နှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်ကူညီနိုင်သည်။ စံ။
ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်အတွက်ရယူပါ ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်လျှောက်ထားပါ ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူပါ
ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်သည်ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခြားအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ
လိုင်စင်သည်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဟောင်ကောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရယူရန်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်ရယူပါ ဟောင်ကောင်တွင်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဟောင်ကောင်တွင်လိုင်စင်ရယူပါ
ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
ဟောင်ကောင်၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသည့်စီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်၊ ၉ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အစိုးရ၏ ၉ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်ထားရန်ကူညီပေးသည်။ တတ်နိုင်သောအခကြေးငွေမှာဟောင်ကောင်လိုင်စင်။
ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းလျှင်ကူညီနိုင်သည်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဟောင်ကောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအစိုးရလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ဟောင်ကောင်တွင်ရှိပြီးသင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ဟောင်ကောင် ၉ အမျိုးအစားလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်မှာဘယ်လိုရနိုင်သလဲ။
ဟောင်ကောင်၏ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့၏တတ်နိုင်သောဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင် ၉ အမျိုးအစားလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်၊ အစိုးရအခွန်များ ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ဟောင်ကောင် ၉ အမျိုးအစားလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်စျေးသက်သာသောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူပါ သင်၏ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကို HK တွင်ရယူပါ
ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် HK ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို HK ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် HK ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ဟောင်ကောင်တွင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကို HK တွင်ရယူပါ
ဟောင်ကောင်၏လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်လျှင်တွေ့ဆုံနိုင်လျှင်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအစိုးရလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
သင်၏ဟောင်ကောင် Type9Asset Management License ကိုဟောင်ကောင်၌ရယူပါ သင်၏ဟောင်ကောင် Type9Asset Management License ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူပါ
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ ဆက်သွယ်ရန်
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်မှာဘယ်လိုရနိုင်သလဲ။
ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်ဟောင်ကောင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ အမျိုးအစား ၉ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အစိုးရအတွက်အစိုးရကြေး ၉ ခုဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည် တတ်နိုင်သောအခကြေးငွေမှာဟောင်ကောင်။
ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းပါကဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လည်းတတ်နိုင်အခကြေးငွေမှာဟောင်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တတ်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအစိုးရလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်တတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်မှာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဟောင်ကောင်အထူးနံပါတ် ၉ လိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အစိုးရ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်မှ ၉ အမျိုးအစားဟောင်ကောင်လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အထူးစျေးနှုန်းများဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကို HK တွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူခြင်း
HK ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းပါကဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်နှင့်သင့်လျော်သောအခကြေးငွေဖြင့်ဟောင်ကောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကို HK တွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကို HK တွင်ရယူခြင်း
ဟောင်ကောင်လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်ပါကဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအစိုးရလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ တတ်နိုင်သောအခကြေးငွေမှာဟောင်ကောင်၏လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်။
ငါ၏အလိုင်စင်ရယူ HK | HK မှာငါ့လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရယူခြင်း
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ ဆက်သွယ်ရန်
ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အဖိုးအခများကားအဘယ်နည်း။
ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အဓိကကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏အခကြေးငွေ | ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်ရှိ9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ခ
ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ခ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်ရှိ9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် | လိုင်စင်ခ
ဟောင်ကောင်ရှိဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းပိုင်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်၏ဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင် type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်၏ဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏အခကြေးငွေ | ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင် type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ | ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင် type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင် Type9ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများ ဆက်သွယ်ရန်
အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ - ဟောင်ကောင်ဘဏ္Financialာရေးလိုင်စင်
ပညာရေးနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကြောင်းအရည်အချင်းများအားအသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်ကောင်စီ
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဘဏ် ၄၇၁ ခုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
ဟောင်ကောင်ရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့။
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်ဟောင်ကောင်လိုအပ်ချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ စရိတ်များ၊ ကန ဦး အပ်ငွေစသည်ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်ဟောင်ကောင်အတွက်ဘဏ်အကောင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည်။
စတင်တည်ထောင်သူများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိတစ် ဦး ချင်းစီ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများကိုထောက်ပံ့သောဟောင်ကောင်အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုဟောင်ကောင်တွင်ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။
ဟောင်ကောင်အတွက်ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဟောင်ကောင်ရှိကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသင်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်အတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဘဏ် ၄၇၂ ခုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းပံ့ပိုးမှုများကိုလည်းပေးသည်။
ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်၊ အခမဲ့ဟောင်ကောင်အတွက် ၉ လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ ၉ လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ9အမျိုးအစားလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဟောင်ကောင်ရှိ9အမျိုးအစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ, ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ, ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဟောင်ကောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, လည်းဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးဟောင်ကောင်အမျိုးအစား9လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ, ခ ဟောင်ကောင် Type9လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံများအတွက်ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ ၉ နေရာဟောင်ကောင်လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင် ၉ ခုလိုင်စင်အတွက်ဟောင်ကောင်အကောင်းဆုံး ၉ ခုလိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ Type9လိုင်စင်၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ , ဟောင်ကောင်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေး, ဟောင်ကောင်အတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများအတွက် ဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင်၊ ဟောင်ကောင်အမျိုးအစား ၉ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုထုတ်ပေးခြင်း - ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် ဟောင်ကောင်၏